Day: September 18, 2020 - Kichuu
Kolombiyaatti kanneen hiriira bahan siidaa nama impaayera Ispeen tajaajile jigsan
Kolombiyaatti kanneen hiriira bahan siidaa nama impaayera Ispeen tajaajile jigsan Siidaan nama ‘Sebastián de Belalcázar’ jedhamu Kibba-lixa magaalaa Popayaanitti argama ture. Namni kuni magaalaa Popayaan bara 1537 ofumaa hundeesse. Poolisiin hawaasa Misaak fuunyoo fayyadamuun [Read More]
OMN: Turtii obbo Dawud Ibsaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo Waliin. (Ful 18, 2020)
OMN: Turtii obbo Dawud Ibsaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo Waliin. (Ful 18, 2020) አማርኛ ዜና – የብር ኖት ለዉጥ፣ የገንዘብ ቅያሪው ፕሮጀክት የህዝቦች እና የሀገር እድገት መሰረት ያደረገ እንዳልሆነ ተጠቆመ። መስከረም 08/2013 ዓ/ም
Breaking: Icciitii OPDO PP keessaa qabatamaa bahe.
Breaking: Icciitii Opdo pp keessaa qabatamaa bahe. Dhugaa fi Haqtii qabsoo Bilisummaa oromoo bara technology fi qubee generation dhokatee hin hafu. Ajjandaa haaraa Ida’amuu dhaaboolee oromoo opdo bilxiginnaa pp jalatti kan jedhuudha. Shira ABO fi [Read More]
Itoophiyaa: ‘Filannoo biyyaaleessaa haalduree ittisa Covid-19 guutuun gaggessuun ni danda’ama’–Ministeera Fayyaa
Itoophiyaa: ‘Filannoo biyyaaleessaa haalduree ittisa Covid-19 guutuun gaggessuun ni danda’ama’–Ministeera Fayyaa Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa kana dura sababii Covid-19tiin yeroo hinhimurtoofneetti dabarfamee ture, haaldureewwan ittisa dhibee kanaa guutuun adeemsisuun akka danda’amu Ministeerri Fayyaa hime. (afaanoromoo)—Manni maree [Read More]
What is the meaning of freedom for Oromia? BY ANGATU YOUSUF ON 18TH SEPTEMBER 2020 (news)–The term freedom has assumed an interesting ambiguity in relation to Oromia and the Oromo struggle. Certainly, there is a [Read More]
Ethiopia: Civil Unrest – Operation Update Report 1,
Ethiopia: Civil Unrest – Operation Update Report 1, DREF n° MDRET022 (18 September 2020) A. SITUATION ANALYSIS Description of the disaster (reliefweb)—On 29 June, after the killing of a famous Ethiopian singer and activist, protests [Read More]
ODA: Walgahii Paarlamaa Har’aa
ODA: Walgahii Paarlamaa Har’aa Manni Maree Bakka Bu’oota ummataa guyaa har’aa walgahii ariifachiisaa waamee jira. Ijoon ajandaa dhiyaatu immoo dhimma COVID 19 irratti gabaasa Ministeera Fayyaa caqasuu kan jedhu. Haa ta’u malee akka dabalataan eeggamu [Read More]
The Ethiopian military started looting the local civilians of their money
The Ethiopian military started looting the local civilians of their money in broad daylight in the pretext of executing order from the PM Abiy Ahmed. Some of the money robbed from the locals so [Read More]